မြောက်အမေရိကသည် T-6G တက္ကဆက်များအတွက် DOWNLOAD FSX SP2 - Rikoooo
အရွယ် 18.82 ကို MB
downloads ရယူရန္ 12 698
MDL ဇာတိလျှင်စမ်းသပ်ပြီးမဟုတ် FSX
ဒါဝိဒ်သည် Eckert, Warwick Carter ကမိုက်ကယ် Flahault
အဆိုပါမြောက်အမေရိကလေကြောင်းသည် T-6 တက္ကဆက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းနှင့်ထဲသို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်လေတပ်, အမေရိကန်ရေတပ်သည်ဗြိတိသျှဓနသဟာယ၏တော်ဝင်လေတပ်နှင့်အခြားလေကြောင်းတပ်ဖွဲ့များ၏လေယာဉ်မှူးလေ့ကျင့်ဖို့အသုံးပြု single-engine ကိုအဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်လေယာဉ်ပျံခဲ့ 1950 ရဲ့။ မြောက်အမေရိကလေကြောင်းကဒီဇိုင်း, T-6 မော်ဒယ်နှင့် operating လေတပ်ပေါ် မူတည်. ပုံစံအမျိုးမျိုးအားဖြင့်လူသိများသည်။ အဆိုပါ USAAC ကို "ကို AT-6", အမေရိကန်ရေတပ်သည် "SNJ" နဲ့ဗြိတိသျှဓနသဟာယလေကြောင်းတပ်ဖွဲ့များ, ဟားဗတ်, ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပကအားဖြင့်အကောင်းဆုံးလူသိများသည်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ကြောင့် designated ။ ဒါဟာပေါ်ပြူလာ warbird လေယာဉ်ပျံနေဆဲဖြစ်သည်။
နှစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, ထုံးစံအသံနှင့်တစ်ဦး functional ကို virtual cockpit, လှပသောစက်ပါဝင်သည်။
အများစုအဖြစ်အာရုံစူးစိုက်မှုကို add-onအဘို့အ s ကို FSX သင်ထည့်သွင်းထားသောရမယ် FSX ဤအတွက် SP2 (Service Pack 2) add-on အကျင့်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲ၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ SP2 ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့။ သငျသညျပြီးသားရှိရမည်သတိပြုပါ SP1 SP2 တပ်ဆင်ရန် installed ။
ဤအထိန်းသိမ်းရေးပြီးနောက်သင်ဆဲပြဿနာများ "ကိုဒေါင်းလုဒ်ရှိပါကgauge Recovery ကို"နှငျ့ DX10 preview ကို disable
Author: ဒါဝိဒ်သည် Eckert, Warwick Carter ကမိုက်ကယ် Flahault